🥇 ▷ 11ka magac ee ugu fiican RPG ee lagu raaxeysto iyadoo la adeegsanayo Xbox Game Pass ✅
11ka magac ee ugu fiican RPG ee lagu raaxeysto iyadoo la adeegsanayo Xbox Game Pass
Mid ka mid ah furayaasha guusha Xbox waa shaki la’aan Xbox Game Pass. Adeeggan wuxuu u oggolaanayaa dhammaan isticmaaleyaasha inay galaan maktabad ballaaran oo ciyaaraha fiidiyowga ah oo leh cinwaanno tayo sare leh, kuwaas oo aan ka heli doonno dhammaan kulamadaas gaarka ah ee Microsoft Studios oo laga heli karo madalkan isla maalinta la bilaabay.
Xbox Game Pass wuxuu ku sii daray magacyo tayo sare leh iyo sheeko waqti dheeri ah, tusaale cad oo tan ah waa ku darista buugyaraha ay dhawaan soo saartay ee Devil May Cry 5, Kingdom Come Deliverance ama Bard’s Tale IV ee cusub ee la sii daayay: Cut’s Director. Ka faa’ideysiga isugeyntaan ugu dambeysay ee buugga ‘Xbox Game Pass’, oo laga soo qaatay Xbox Generation waxaan rabnaa inaan ku soo bandhigno liiska kow iyo toban kulan RPG oo loogu talagalay Xbox One oo laga heli karo Xbox Game Pass.
Boqortooyada Kaalay: Badbaadin
Naftaada gasho kabaha Henry, wiilka Blacksmith-ka, oo booqo meelaha taariikhiga ah ee dhabta ah ee sheekadan oo ku yaal Boqortooyada Roomaanka Quduuska ah. Markaad si fudud uga baxsato weerarka Skalice oo aad aragto sida reerkaaga iyo asxaabtaada loo dilay, waxaad bilaabi doontaa tacliin iyada oo ujeedadu tahay aargudashada dhimashada waalidkaa oo aad eryi doonto Barbarianka Cumanos.
Imaatinka Boqortooyada: Badbaadiyuhu wuxuu ina siinayaa madadaalo aad u wanaagsan oo qarnigii 15aad Yurub ah oo aan ugu safri karno xornimo buuxda dhabarkayaga buuraheena. Nidaamkiisa dagaalku wuxuu kaa dhigayaa inaad u aragto cadow kasta inuu yahay hanjabaad dhab ah, maadaama Boqortooyada timaad: Badbaadinta ma jiraan sixir ama awood qaas ah, xooggaagu wuxuu kuxiran yahay awooddaada, marka haddii aad aragto koox calooshood u shaqeystayaal hub culus isku dayaya inay ku weeraraan Inta lagu gudajiro habeynkii, ikhtiyaarkaaga ugu fiican wuxuu noqon doonaa orod hadaadan rabin inaad dhimatid.
Xaraashka Bard’s Tale IV: Cutubka Agaasimeyaasha
Mid ka mid ah ciyaarihii ugu dambeeyay ee lagu soo dejiyay Xbox Game Pass isla maalinta la bilaabay, wuxuu ahaa qeyb cusub oo ah waxa laga yaabo inuu yahay mid ka mid ah meelaha ugu caansan ee loo yaqaan ‘RPG sagas’ ee taariikhda, The Bard’s Tale. Xaraashka ‘Bard’s Tale IV’: Cutubka Agaasime keli kuma imaan, laakiin sidoo kale waxaa dhawaan lagu daray ‘The Bard’s Tale Trilogy’, oo ay ku jiraan cinwaannadii asalka ahaa, si loo ogaado dhacdooyinka horseedda qayb cusub. Intaa waxaa sii dheer, waxaan fursad u yeelan doonnaa inaan abuurno koox hal abuurleyaal ah oo ku xardhan cinwaanka koowaad oo aan ku dhammaystirno dhamman taraafikada dhammaantood!
Casharka ‘Bard’s Tale IV’: Cutubka Agaasimuhu wuxuu noo keenayaa khibradda RPGs-ga caadiga ah ee gebi ahaanba la cusbooneysiiyay. Waxaan lahaan doonnaa afar fasallo dabeecad oo waaweyn, Bard, Fighter, Practitioner iyo Rogue, oo midkasta leh 60 xirfado iyo in kabadan 21 fasallo oo aan dooran karno si aan u abuurnno koox sida ku xusan qaabka aan u ciyaarno si aan ula qabsano tan cusub shar…
Kooxda loo yaqaan ‘Battle Chasers’: Nightwar
Tartanka ‘THQ Nordic’ waa ciyaar lagu dhiirrigeliyo RPG-yada caadiga ah ee aan ku raaxeysan karno sagaalaadyadii adduunka ee taxanaha majaajillada ah, oo leh saameyn xoog leh ciyaaraha JRPG sida aan si cad u arki karno nidaamkeeda dagaalka, oo ku saleysan a classic 3 vs 3 system system. Kooxda loo yaqaan ‘Battle Chasers’: Nightwar waxaan ka heli doonnaa adduunyo ka buuxa godad si aan kala sooc lahayn loo soo saaray, sidaa darteed markasta oo aad ku celiso aag waxaad heleysaa god ka duwan kuwii hore.
Waxaan bilaabi karnaa xiisaha aan u leenahay xakameynta Gully, gabar ah oo ka dhaxashay xoogag mucjiso ah oo sixir ah oo kahelay aabaheed kaas oo siiya awood cajiib ah. Sababo la xiriira weerar ay burcaddu ku qaadday, diyaaraddaheena waxay ku dhacday jasiirad qarsoon halkaasoo awood xoog leh oo duug ah ay ku soo tooso oo ay adduunka ku dhammaynayso sida aan ognahay. Hadafkeenu wuxuu noqon doonaa in dib loo mideeyo kooxdeenna si aan ulanolanno masiibadaas xun.
Xaaladdan oo kale waxaan fursad u leennahay inaan ku raaxeysto dhammaystiran ee The Banner Saga Thanksgiving ka Xbox Game Pass. Haddii aadan isku deyin sagaalkan cajiibka ah, ha ka fikirin laba jeer oo hada soo dejiso. Banner Saga waa cinwaan xeelad taatiko ah oo loo dejiyey taariikh-nololeedka Viking oo leh qayb laba garaaf ahaan 2D ah isla markaana leh dagaal iyo muusig shaneemo gacanta.
‘The Banner Saga’ waxaan la wareegi doonnaa gawaarida safarka iyadoo la abuurayo sheeko u gaar ah Nordic. Maareynta ilaha, xulashada jilayaasha saxda ah xaalad kasta, ama sameynta xulashada saxda ah labadaba dagaalka iyo inta lagu jiro wadahadalada waxay saameyn xoogan ku yeelan doonaan ciyaarta. Waxaan heysanaa wadar ahaan 48 astaamood oo ah 4 jinsiyo kaladuwan oo loo qaybiyey in kabadan 40 fasal, mid walbana leh xirfadahooda gaarka ah iyo hormarinta.
MMORPG Pearl Abisin ‘wuxuu ku yimid ku meel gaar ah kumeel gaar ah Xbox One consoles. Cinwaanka leh malaayiin ciyaartoy adduunka oo dhan wuxuu hormuud u ahaa mideynta ciribtirka caalamiga ah ee MMORPG laakiin leh nidaam dagaal oo ku saleysan magacyada ARPG, abuuraya khibrad dagaal si ka dhaqso badan ugana xoog badan sidii caadiga ahayd MMORPG.
Desert Black wuxuu leeyahay mid ka mid adduunka ugu weyn ee aan maanta ka heli karno adduunka ciyaaraha fiidiyowga. Waxaan heysan doonnaa casharro fara badan oo kala duwan oo aan ka dooran karno oo aan ku abuuri karno dabeecadeena iyo sidoo kale xulashooyinka hagaajinta aan xadidneyn. Thanks to tirada badan ee ergooyinka, soo gudbinta, maamulayaasha, takhasuska, iyo dhammaan xulashooyinka ay bixiyaan Desert Black, waxaan ku bixin doonaa saacado iyo saacado cinwaankan ah.
Vampyr wuxuu na geliyaa kabaha Dr. Jonathan Reid, halyeeygii dagaalkii weynaa ee, markuu ku soo laabto London, waxaa haleelay weerar kedis ah oo uu ku noqon doono Vampire. Ka dib markii aan maareynay si aan si mucjiso ah uga badbaano, waxaan bilaabi doonnaa safar baaris ah oo laga sameeyay London qarnigii labaatanaad si aan u ogaano cidda ka dambeysa weerarkan, oo keenaya xaaladaada cusub iyo geerida walaashaa.
Vampyr waxaan lahaan doonnaa awood aan ku go’aansanno nolosha ama geerida dadka deggan xaafadaha kala duwan ee London oo aan booqan doonno inta aan ku guda jirno, waxaan awood u yeelan doonnaa inaan harraad u dhinno oo aan ku quudinno, taas oo aan ku filnaan doonno waayo-aragnimo lagu xoojinayo awooddeena vampire laakiin waxaan u dhinnaa dhibanaha joogtada ah dhibanaha; Laakiin haddii aan go’aansanno inaannaan nafteena quudin, awood uma yeelan doonno inaan horumarinno awooddeena, si aan u noqon karno ugaarsade ugaadhsadeyaasha Vampire.
Deus Ex: Aadanaha waa La Qaybiyey
Ku dhex gal naftaada cajiibka ah mustaqbalka mustaqbal ee Deus Ex: Aadanaha ayaa loo qeybiyey. Naftaada gasho kabaha wakiilka qarsoodiga ah Adam Jensen baaritaankiisa si aad u iftiimiso shirqoolkii loo yaqaan ‘Illuminati’ ee sababa midab-kala-sooca kaas oo lagu soo rogay bini-aadamka, aadanaha oo horumar ku sameynaya jirkooda oo siiya awoodo cajiib ah.
Deus Ex: Aadamiga waa la qaybsaday waa inaan falanqeeynaa xaalad kasta si aan ula tacaalno sida ugu wanaagsan ee suurtogalka ah, ha noqoto isticmaalida khiyaano, fuleynimo ama si fudud rabshadaha qaab dhismeedka FPS ee ugu fiican, in kasta oo doorashadan ugu dambeysa ay badanaa horseedeyso geeri degdeg ah. Waxaan yeelan doonnaa dhowr horumar oo aan daahfuri doonno oo noo oggolaan doona inaan furno xirfado cusub.
Qaybintii ugu dambeysay ee sifiican loo yaqaan ‘Bethesda franchise’ ayaa ku dhaqaaqeysa ficilkii Massachusets ka dib 210 sano kadib dagaalkii nukliyeerka ee kiciyay meeraha. Waxaan nafteena gelinaynaa kabaha kaliya ee ka badbaaday hoyga 111, kaasoo hurdada ka toosay burburka awgiis, ka dib markii la canaantay si aan u aragno sida ay ragga qaar u galaan hoyga si ay wiilkiisa u qaataan ugana dhammeeyaan nolosha xaaskiisa.
Fallout 4 wuxuu ilaaliyaa ciyaarta ciyaarta Fallout 3 iyo nidaamka hormarinta dabeecada S.P.E.C.IA.L., halkaas oo warqad kasta loo qoondeeyo sifo u furnaan doonta xirfadaha qaarkood ama kuwa kale, iyadoo kuxiran sifooyinkayaga. Cilmiga cusub ee gudbintaani waa mid dheer oo ah qaab dhismeedka taas oo aan ugu abuuri karno saldhig u gaar ah si aan uga badbaado cidlada.
Dunida ugaadhsiga ugaarta
Ciyaartii ugu guulaha badneyd taariikhda Capcom. Ku biir saaxiibbadaada ugaadhsiga ah si aad u baadho nolosha buuxda ee Monster Hunter World na siiso oo aad tijaabiso xirfadahaaga isku dayaya in aad ugaarsato daanyeerro waaweyn oo awood leh iyada oo aad ogtahay waxyaalaha qarsoon ee adduunka cusub.
Ka xulo hub fara badan oo kala duwan midka ugu habboon qaabkaaga ciyaarta, ugaarsada kuwa awoodda leh ee dabiiciga ah si aad u hesho agab aad ku abuuri karto qalab cusub oo ka fiican. Markii la keenay World Monster Hunter World: Iceborne irdaha, waqtigaani waa waqtiga ugufiican ee lagu galo aduunka Monster Hunter World.
Howlgalka: Sun Xatooyo
Howlgallada: The Xatooyo Sun waa abaalmarinta ay sameysay Zen Studios ciyaartii caadiga ahayd ee RPG-da dungeons-ka. Ku deji adduunyo khiyaali ah, Howlgal: The xatooyada Sun waxay iskudarsataa khuraafaadka sheekooyinka hidaha iyo dhaqanka ee kala duwan ee Hungary iyo meelo taariikhi ah oo dhab ah.
Hadafkayagu wuxuu noqon doonaa in la helo Sun King Napkiraly, oo la afduubay isagoo ka tagaya Howlgalka gudcurka mugdiga ah. Si tan loo sameeyo waa inaan u safarnaa adduunka oo wajahayno cadow fara badan oo kala duwan xagga istiraatiijiga ah ee qofka ugu horeeya iyo sidoo kale xalinta khilaafaadka tiro badan si aan u sii wadno safarkayaga.
Wasteland 2: Cut Cut Director
Laga soo bilaabo gacanta soo-saareyaasha cinwaannada asalka ah ee Fallout, Wasteland 2 ayaa noo yimaada, taxanaha istiraatiijiyad caan ah ee loo yaqaan ‘RPG’ ee lagu bilaabay PC 1988-kii oo lagu dejiyay adduunka post-apocalyptic. Nooca Agaasimuhu wuxuu leeyahay qayb cusub oo horumarin leh oo garaafyo ah kana mid ah horumarinnada kale, sida suuragalnimada in lagu habeeyo xubnaha kooxdeena.
Abuur kooxdaada oo dhex guuro cidlada intaad shaaca ka qaadid siraha. Waligaa ma heli doontid qaab keliya oo aad wax uga qabato, waxaad had iyo jeer ka heli doontaa habab kala duwan oo xaalad loo wajaho waana inaad go’aamiso midka ku habboon qaabkaaga ciyaarta iyadoo kuxiran jilayaasha aad ku leedahay kooxdaada.
Sida aad arki karto, liiska cinwaanada RPG ee laga heli karo Xbox Game Pass waa mid balaaran oo kala duwan, ku ciyaarista noocyo kala duwan oo RPG leh goobo kala duwan. Wax kasta oo ku soo beegmay iyada oo inta badan ciyaaraha lagu soo daray liistadii hore waa qaddarka badan ee saacadaha ciyaarta ee ay bixiyaan, kaas oo qaadan kara bilooyin, iyada oo aan la buunbuunin, in la dhammeeyo dhammaan ciyaarihii lagu soo daray liistadan. Ha ka shakinin in Xbox Game Pass uu sii wadi doono inuu ku daro magacyo tayo sare leh oo RPG ah buugyaraha, laakiin hadda, waad ogtahay meesha laga bilaabayo.